Qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Hirshabelle oo dowladda dhexe ku cambaareeyey faragalinta Hirshabelle. - Ilays News
Qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Hirshabelle oo dowladda dhexe ku cambaareeyey faragalinta Hirshabelle.
November 3, 2020 admin1
Qaar kamid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta Hirshabelle ayaa ka horyimid qaabka loo dhisay xildhibaanada maamulkaas, iyagoo eedeeyey madaxda sare ee dowladda inay boobtay dhismihii maamulkaasi oo ay abuurtay khilaaf beelaha dega.
Siyaasiga Mohamed Yusuf Ahmed oo kamid ah murashaxiinta golaha shacabka dowladda Federaalka ayaa si kulul uga horyimid in habeen madoow lagu dhawaaqo xubnaha barlamaanka 2aad ee Hirshabelle oo uu ku tilmaamay mas’uuliyad darro iyo wax aan la qaadan karin oo ay qaadayaan Madaxweynaha dalka iyo taliyihiisa Nisa oo si cad u boobay dhismihii xubnaha barlamaanka.
”Waxaa noo muuqata in dowladdu ay Hirshabelle la doonayso burbur, oo ay rabaan shaqaalahoodii inay xildhibaanp ka dhigaan si ay u doortaan qof iyaga siyaasaddooda guracan u fuliyo” ayuu yiri siyaasiga Mohamed Yusuf oo intaana raaciyay in wixii ka xumaada reer Hirshabelle ay qaadi doonaan mas’uuliyaddooda odoyaasha dhaqanka ee loo adeegsaday iyo inta kale ee Villada ku taageertay qaskaas muuqda.
Wuxuu ka digay in la burburiyo maamulkaas oo ay tahay in waxgaradka iyo siyaasiyiinta Hirshabelle ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa.